१८ असार २०७७ बिहीबार Thursday, July 2, 2020
KATHMANDUTemperature 24°CAir Quality87
दिमागबाट नहराउने फिल्म हो, मर्दानी २ । बलात्कारमाथि कैयौँ फिल्म बने तर यो अलग र विशेष छ ।
१५ पुस २०७६ मंगलबार
हैदरावादमा प्रियंका रेड्डीका चार बलात्कारीलाई प्रहरीले इकाउन्टर गरेपछि भारतभर दुई धार स्पष्ट देखियो । एकथरीले बलात्कारी बाँच्न लायक नहुने र अदालती प्रक्रिया लम्बेतान हुने भएकाले गोली ठोक्नु उचित भन्दै प्रशंसा गरे । अर्काथरीले अदालतले अपराधी नठराई प्रहरीले मार्नु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि धब्बा भन्दै चर्को विरोध गरे । समाजको ठूलो तप्काचाहिँ प्रहरीकै पक्षमा छ किनभने बलात्कारका घटनाले समाजमा आतंक मच्चाइरहेको छ । बलात्कारको यो डरलाग्दो नियतिलाई बरोबर पर्दामा उतारिन्छ । मर्दानी २ पछिल्लो उदाहरण हो । निर्देशक/लेखक हुन्, गोपी पुथरन । पाँच वर्षअगाडि प्रदर्शित मर्दानीको सिक्वेल हो यो । मुख्य भूमिकामा रानी मुर्खजी नै छिन् ।
बलात्कार एक व्यक्ति वा निश्चित समूहले गर्छ तर त्यसमा पूरा समाज कसरी जोडिन्छ ? मर्दानी २ मा त्यसको झल्को पाइन्छ । निर्देशक पुथरनले महिला प्रहरी अधिकृत र खुंखार यौन अपराधीलाई केन्द्रमा राखेका छन् । विषय र पात्रचयनसँगै कसिलो कथावाचनले दर्शकलाई पूरापूर बाँध्छ ।
राजस्थानको कोटा सहरमा एसपी शिवानी शिवाजी रोय (रानी मुखर्जी) र बलाकारी–हत्यारा सन्नी (विशाल जेठ्वा) को प्रवेश करिब एकै समयमा हुन्छ । सन्नीले अपरिचित युवतीलाई आफ्नो जालमा फसाएर बलात्कारपछि निर्मम हत्या गर्छन् । एकपछि अर्को छात्राको हत्या भएपछि कोटा त्रसित हुन्छ । सन्नीले एसपी शिवानीसमेत आफूलाई पक्डन चुनौती दिन्छन् । शिवानी पूरा पुलिस फोर्स लगाएर अपराधी समात्न लागिपर्छिन् तर सन्नी यति ‘स्मार्ट’ छ कि प्रहरीलाई छक्काइदिन्छ । तर कहिलेसम्म ? क्लाइमेक्स अतिरञ्जित होइन, सार्थक छ ।
पहिलो दृश्यबाटै सन्नीको चरित्र स्थापित गर्दै मूलकथामा प्रवेश गरिएको छ । लुथरन कुनै सस्पेन्स राख्दैनन्, खुरुखुरु कथा भन्दै जान्छन् तर पात्रको समीकरण र प्रवृत्ति रोचक भएकाले फिल्मप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान्छ । यो फिल्मको मेरुदण्ड भनेकै सन्नीको चरित्र र पफर्मेन्स हो । उनका सबै अपराधबारे दर्शक जानकार हुन्छन्, घृणा र डर पैदा हुन्छ तर यति नयाँ–नयाँ शैली अपनाउँछन् कि बेवास्ता गर्नै सकिन्न । हाम्रो सामाजिक बनोटले सन्नीजस्ता पात्र जन्माइरहेको छ किनभने उसलाई संरक्षण गर्ने र सहरमा आमन्त्रण गर्ने अरु कोही नभएर स्थानीय नेता हुन्छन् । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेताले अपराधी जन्माउने, पोस्ने र आखिरमा आफैँलाई घातक हुने तीतो–सत्यको प्रतिनिधि हो, सन्नी ।
बलात्कारको घटना भएकाले एसपी शिवानी अझ मर्माहत हुन्छिन् तर अपराधी समात्न उनले प्रहरी संगठनभित्रबाट साथ पाउँदिनन्, उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकृतले समेत हेप्छन्, टेर्दैनन् । कारण, उनी महिला हुन् । बाहिर जति समानताको ढोल पिटे पनि उच्च ओहोदा आसिन पुरुषलाई महिलाको निर्देशन मान्न कथित ‘इगो’ ले दिँदैन । खासमा बलात्कारको अन्तर्यमा महिलामाथिको यही बदला, प्रतिशोध र अपमान लुकेको हुन्छ, न कि यौन आशक्ति र कुन्ठा । सन्नीको पृष्ठभूमि, पुरुष प्रहरी अधिकृत र नेतामार्फत यो तीतो–सत्यलाई प्रस्ट्याइएको छ । सन्नीको पागलपन र आवेगपूर्ण हर्कतले दर्शकलाई समेत त्रसित बनाउँछ ।
समाजझैँ सिनेमामा पनि महिला पात्र कमजोर छन् । पुरुषको बाहुबलीपना देखाउन कि महिलालाई प्रयोग गरिएको हुन्छ कि सौन्दर्य साधनामा सीमित गरिन्छ । यो विद्यमान कथनविपरीत छ, मर्दानी २ । आफ्नै क्षमताले सहरकी प्रहरी प्रमुख बनेकी महिला छिन्, जसले दर्जनौँ गुण्डालाई ढालेर होइन, एकदमै व्यावहारिक र कानुनसम्मत ढंगले अपराधीलाई समात्छिन् । अर्थात्, वास्तविक जीवनमा अनुसरण गर्न योग्य नायक । आफूमाथिको विभेदलाई गलत साबित गर्न उनी निर्भीक लाग्छिन् । यस हिसाबले पनि फिल्म प्रशंसनीय छ । तर सुरुआतबाटै मिडियाको प्रयोगले चाहिँ केन्द्रीय कथाको बेगलाई बिथोल्छ । झन् फिल्मको अन्त्यभन्दा केही अगाडि शिवानीको टेलिभिजन अन्तर्वार्ता त बेकामे छ । दृश्यमार्फत व्यक्त गरिसकेको महिला सशक्तीकरणको सन्देशमाथि विश्वास नभएर निर्देशकले बासी संवाद प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेतासामु प्रहरीलाई ज्यादै निरीह बनाइएको छ ।
सक्षम प्रहरी अधिकृतका रुपमा रानी मुखर्जी जीवन्त लाग्छिन् । यस्तै भूमिकाले हो, कलाकारलाई लामो आयु दिने । ग्ल्यामर, गीत, मारधाड एक्सनबिनै उनको चरित्रले मन जित्छ । रानीलाई बलशाली बनाउन विशाल जेठ्वाको भूमिका अपरिहार्य छ । विशालको यो डेब्यु फिल्म हो । पहिलो फिल्ममै यति सशक्त चरित्र पाउनु र त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनुले उनको भविष्य उज्यालो देखिन्छ । उनी भिलेनको परम्परागत मानकमा अटाउँदैनन् ।
खासमा कथाका लागि उनी ‘भिलेन’ हुन् भने फिल्मको ‘हिरो’ । रानी र विशालको गज्जबको रसायन नै फिल्मको वजन बढाएको छ । सामान्य कथालाई असामान्य ढंगले पस्केका निर्देशक पुथरन प्रशंसाका बलिया हकदार हुन् ।
फिल्म : मर्दानी २
निर्देशक/लेखक : गोपी पुथरन
कलाकार : रानी मुखर्जी, विशाल जेठ्वा
जनरा : एक्सन–थ्रीलर
समय : १ घन्टा ४५ मिनेट ।
रेटिङ : ३.५/५
गोकर्ण गौतम नेपालका उपसम्पादक हुन् । आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नात्तकोत्तर गौतम कला, मनोरञ्जन र सामाजिक बिषयमा कलम चलाउँछन् । उनी २०७० यता नेपालमा आबद्ध छन् । ट्विटर: @gokgautam